Kulliyada Hore - Axdiga Waxbarashada Shirarka
Ka qalinjabiya dugsiga sare adigoo qaadanaya
Fasalada kulliyadda oo bilaash ah
Miyaad wax badan ka rabtaa dugsigaaga sare? Isdiiwaan gelinta sii kordheysa ee Barnaamijka Kulliyada Hore ee Summit waxay xaqiijinaysaa xiisaha sii kordheysa ee lagu dhammeynayo dugsiga sare si ka duwan! Arday kastaa wuxuu u qalmaa inuu wax ku barto deegaan iyaga ugu roon.
Arday badan iyo in ka badan ayaa raba bay'ad ka jeedin yar. Ardeyda dugsiga sare waxay rabaan barnaamij u oggolaanaya inay SAHAMiyaan xirfadaha, raacaan shahaado la-hawlgalayaasha, ogaadaan waddooyinka, oo ay la falgalaan bartayaasha goob qaan-gaar ah. DALBADO NOW ka hor intaanay boosaska is-diiwaangelintu buuxin!
Wada-hawlgalayaasha shir-weyne ku dhawaad ​​kulleejada bulshada ee kuyaala Oregon. Ardaydayada dugsiga sare waxay si firfircoon u raadinayaan danaha shaqada waxayna helayaan dhibcaha kuliyada iyagoo dhammaystiraya shuruudahooda dugsiga sare.
Arday kasta wuxuu si dhow ula shaqeeyaa la-taliyeyaasha Summit si loo abuuro qorshe waxbarasho oo si gaar ah ugu habboon himilooyinkooda mustaqbalka. Ardaydu waxay kasban karaan dhibco loo wareejin karo jaamacad afar sano ah, sahamiyaan xirfadaha iyo xulashooyinka xirfadaha farsamada, ka shaqeynta horumarinta xirfada, ama ku bilaabaan shahaadada asxaabta